आईओएस New मा नयाँ बगले तपाईंलाई आईफोनमा लक स्क्रिन छोड्न दिन्छ आईफोन समाचार
आईओएस New मा नयाँ बगले आईफोनमा लक स्क्रिनलाई बाइपास गर्न अनुमति दिन्छ
को आईओएस १ in मा नयाँ के छ हामीले पहिले नै हाम्रो ब्लगमा लम्बाइमा बोलेका छौं। र हामीसँग पक्कै पनि पत्ता लगाउन चीजहरू छन्, हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि यो क्षणमा यो बेटा हो। र त्यो प्रयोगकर्ताहरू आईओएस and र आईओएस .7.१.१ को बिच चल्दै छन्। मँ दुई चीजको लागि ती दुई संस्करण बीच भन्छु। पहिलो किनभने यो निर्भर गर्दछ कि तपाईं एक साथ वा जेलब्रेक बिना प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। दोस्रो, किनभने हामीले भर्खरै देख्यौं कि तपाईंले भर्खरै देख्नु भएको नयाँ बगले ती सबै उपकरणहरूलाई असर गर्छ।
यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका अनुसार आईओएस security मा सुरक्षा बग र उच्चले आईफोन लक स्क्रिनलाई बाइपास गर्न अनुमति दिन्छ, प्रभावित प्रयोगकर्ताहरू जोसँग आईफोन or वा माथिको हुन्छ र जसले आईओएस or वा सोभन्दा माथि कुनै अन्तिम संस्करणमा रोल गर्दछ। त्यो हो, हामी सबैको एक राम्रो हिस्सा आईफोन छ। र एप्पल ओएसमा यो नयाँ बग कसरी फेला पर्‍यो? ठिक छ, हामी तल यसको बारेमा बताउँछौं।
तपाईंले भिडियोमा हेरेजस्तै यो नियन्त्रण केन्द्रमा पहुँच गर्न, आईफोनमा हवाइजहाज मोड सक्रिय गर्न, सूचना केन्द्रमा स्वाइप गर्न र मिस कलमा पहुँच गर्नका लागि पर्याप्त छ। स्पष्ट रूपमा यससँग आईफोनमा लक स्क्रिनलाई बाइपास गर्न iOS7र माथिको नयाँ बग यो एक कल प्राप्त गर्न आवश्यक छ र यसको उत्तर छैन। यो सत्य हो कि सुरक्षा त्रुटिले टर्मिनलमा पूर्ण पहुँचको अनुमति दिँदैन, तर यो मेल पहुँच गर्न, सन्देशहरू पठाउन वा केही प्रयोगकर्ता सेटि reviewहरूको समीक्षा गर्न वैध हुनेछ।
यो सबैभन्दा खतरनाक छैन आईओएसमा पत्ता लगाइएका बगहरू, तर होईन कि यो सबै उपकरणहरूलाई असर गर्छ भनेर थाहा छ, र आईओएस for को लागि अझै पर्याप्त छ, एप्पल चिन्तित एक मुद्दा हुनु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईओएस New मा नयाँ बगले आईफोनमा लक स्क्रिनलाई बाइपास गर्न अनुमति दिन्छ
जेलब्रेक र फ्लिप नियन्त्रण केन्द्रको साथ तपाईं हवाइजहाज मोडलाई सक्रिय हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ।
Javipf लाई जवाफ दिनुहोस्
Vidal HDR भन्यो
धेरै राम्रो समाचार एप्पल व्यक्ति काममा लाग्न
Vidal HDR लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले आईओएस in मा बग पत्ता लगाएको छु जुन टर्मिनलमा पूर्ण पहुँच छोड्छ, र म पूर्णतया गम्भीर छु, के तपाई मलाई त्यसबारे जानकारी दिन एप्पललाई सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ?
यो हो कि तपाईंले यसलाई चलाउनुभएको छैन वा के हो? जे भए पनि। IMessages मात्र कसरी हुन्छ वा कसरी? तपाईले पोष्टमा भनेको जस्तै र मैले केही पनि भनेको छैन, मैले भनेको छु: «तपाईंले भिडियोमा हेरेजस्तै यो कन्ट्रोल सेन्टरमा पहुँच गर्नका लागि पर्याप्त छ, आईफोनमा हवाइजहाज मोड सक्रिय गर्नुहोस्, सूचनामा स्वाइप गर्नुहोस्। केन्द्र र मिस कलमा पहुँच गर्नुहोस्। Hem अहेम, यो पहिलो तरिका हो कि यो तपाईंलाई कल गर्न हवाइजहाज मोड निष्क्रिय गर्न बताउनेछ र यदि तपाईं रद्द गर्नुभयो भने, तपाईं पछाडि अवरोधमा जान सक्नुहुन्छ। र व्हाट्सएप उहीसँग, यो बाइपास गर्दैन, यसले सजिलै अनलक स्क्रिनमा लैजान्छ।
मैले यसलाई आईओएस .7.1.1.१.१ / .7.0.6.०. and र आईफोन and र c सीमा परीक्षण गरेको छु, र बाइपास छोड्दैन। मसँग cccontrols संग जेल ब्रेक छ, उही चीजले मलाई बचाउँदछ ...
बीट्सले यसको नयाँ सोलो २ हेडफोनलाई आईफोनसँग टाउट्स गर्दछ
किन्डल अनुप्रयोग अब श्रव्य संग एकीकृत गर्दछ